Doorashada Baadariga Roman Catholic - BBC Somali - Warar
Doorashada Baadariga Roman Catholic
Markii u dambaysay ee la cusboonaysiiyay: 12 Maarso, 2013, 09:59 GMT 12:59 SGA
Baadariyaasha kaniisadda Catholic-ga ayaa leh kulan gaar ah oo ka dhacay kaniisadda Peter Basilica ee magaalada Rome, iyagoo bilaabaya in ay doortaan doorashada baadari wayne cusub.
Dad ayaa isugu tagay bannaanka si ay uga daawadaan munaasabadda shaashado waawayn.
Maanta galinka dambe, ayaa dhamaan baadariyaasha da'doodu ka yar tahay sideetan sano ay ku xeroon doonaan kaniisadda Sistine oo codbixintu ay ka bilaaban doonto.
Boqol iyo shan iyo toban baadari ayaa gaar loo xeraynayaa iyagoo aan cid kale arki doonin, waxaana la marinayaa dhaar, iyadoo ay dhowr maalmood qaadan karto in baadari la doorto.
Baadariyaasha ayaa codkooda dhiibac doonaa maalintii afar jeer ilaa baadari cusub ay isku afgartaan.
Weriyaha BBC uga soo warama Rome ayaa sheegay in uusan jirin baadari la sii og yahay in la dooran doonto si uu u badalo Baadariga Benedic l16, oo ka degan hogaaminta kaniisadda kadib sideed sano oo uu xukunka hayay, isagoo noqday baadarigii ugu horeeyay in xilka ka dega muddo lix boqol oo sano ah.